Maxay cayaartu sameeyaan qaar ka mid ah ciyaartoyda cayaarta? Mararka qaarkood ma fahmi karo caddeymaha "Waa raaxo aad u socoto Afrika ilaa kumanaan kiilomitir si ay ilmo u korsato kadibna u keento suufka fursado sawir leh? "
Posted By: Admi1waa: Nofembar 3, 2018 00: 20 No Comments
Miyuu waalan yahay inuu iska bixiyo lacagta raaxada ah?
Maxay cayaartu ugu dambeyntii ciyaaraan?
Ma garanayo in dadkani runtii leeyihiin wacyi-galin ah in waxyaabaha qaarkood aanay awoodin oo aan la sii wadi karin. Iyo midka yar ee miskiinka ah, dhammaantood dhoola cadeynaya ... "Waxaan arki doonaa wax kasta oo ka mid ah caddaanka. »
Nov29 09: 31